Misy firaisana tsikombakomba ? : mpivaro-kena tokony higadra, hitan’ny olona ao an-tsena | NewsMada
Misy firaisana tsikombakomba ? : mpivaro-kena tokony higadra, hitan’ny olona ao an-tsena
Miteraka resabe ao Ambohimena, Antsirabe sy any Ibity, kaominina Antsirabe II ny momba ity lehilahy iray, voalaza fa tokony higadra ao amin’ny fonjan’Antsirabe, nefa hitan’ny olona miriaria, mivaro-kena ao Ambohimena. Misy firaisana tsikombakomba ?
Miaina ao anatin’ny tebiteby sy ny horohoro hatrany ny mponina ao amin’ny faritra Vakinankaratra amin’ny firongatry ny asan-dahalo. Isan’izany ny ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ibity. Raha ny zava-nitranga tany an-toerana, afakomaly alina, andian-dahalo nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no indray nanafika tao amin’ny fokontany Mananjara, kaominina ambanivohitra Ibity. Araka ny fanazavan’ny ben’ny Tanànan’Ibity, Ratovohery Arnauld, nahazo loharanom-baovao izy ireo tamin’io alina io ka tonga niaraka tamin’ny zandary nanao fanarahan-dia ireo dahalo. Omaly tamin’ny 4 ora maraina, tratra tao amin’ny fokontany Verezambola, kaominina Antsirabe II ireo omby halatra niaraka tamin’ny dahalo roa lahy. Fantatra nandritra ny fanadihadian’ny zandary tamin’ny alalan’ny tatitra nampitain’ny ben’ny Tanàna hatrany fa mpivaro-kena iray ao amin’ny fokontany Ambohimena Antsirabe I no miray tsikombakomba amin’ireto dahalo tratra ireto. Ity mpivaro-kena ity no mandray ny omby halatra ka mivarotra ny hena ao an-tsena.
Nohamafisin’ny ben’ny Tanàna hatrany anefa fa mbola migadra ao amin’ny fonjan’Antsirabe ity mpivaro-kena ity nefa mahavariana ny nahafahany miray tsikombakomba amin’ireo dahalo amin’ny alalan’ny fivarotana ny hena.
Nidina nanao fanadihadiana nanamarina teny anivon’ny fonjan’Antsirabe niaraka tamin’ny kaomandin’ny borigadin’ny zandary ilay ben’ny Tanàna momba ity mpivaro-kena tokony hamita sazy ity nefa tafavoaka ety ivelan’ny fonja ka miray tendro amin’ny dahalo. “Ao am-ponja io fa tsy mivoaka na adiny iray aza, hoy ny lehiben’ny fonjan’Antsirabe”, araka ny tatitra nampitain’ny ben’ny Tanànan’Ibity, Ratovohery Arnauld hatrany.
Misy ny firaisana tsikombakomba amin’ny lehiben’ny fonja…
Nilaza ity ben’ny Tanàna ity fa misy firaisana tsikombakomba eo amin’ity mpivaro-kena mamita sazy nefa tafavoaka ivelan’ny fonja ity sy ny lehiben’ny fonjan’Antsirabe matoa tafavoaka ny fonja izy. Betsaka rahateo ireo olona nijoro vavolombelona fa tsy migadra any am-ponja ity mpivaro-kena ity. “Misy ireo olona manambola aminy ary mbola vao avy nitaky ny volany tany aminy ireo olona ireo”, hoy hatrany ny ben’ny Tanànan’Ibity.
Ao anatin’ny fanadihadiana ny zandary any an-toerana amin’izao ka aorian’izay ny hamantarana ny marina rehetra momba ity raharaha ity.
Maty voatifitry ny zandary koa ny dahalo iray antsoina hoe Tsihala, 28 taona tao amin’ny fokontany Beroroha, afakomaly maraina. Nentina hisambotra ireo namany izy kanjo nandositra ka nitifitra avy hatrany ny zandary. Namoy ny ainy noho ny fahaverezan-dra be loatra.
Lavon’ny zandary koa ireo dahalo roa lahy tompon’antoka tamin’ny fanafihana tao Miarinarivokely, fokontany Fiakarantsoa Bemahatazana, afakomaly maraina. Nisy ny fifandonana teo amin’ny zandary avy ao amin’ny poste avancé Bemahatazana ao andrefan’i Miarinarivokely. Vokany, lavo ny dahalo roa raha tafatsoaka kosa ireo namany roa lahy niaraka tamin’ny basy.